Ngbanwe ohuru ohuru site na Big Data | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Taa Ọ ọ dị mkpa na ndụ anyị, ụlọ ọrụ anyị, ọmụmụ ihe anyị na data anyị… Big Data dị mkpa na ihe a niile.
Eziokwu bụ na belụsọ na ntụgharị okwu ahụ n’onwe ya "Nnukwu data" mmadụ ole na ole na-achịkwa okwu ahụ na ihe ọ pụtara n'ezie.
N'igosiputa echiche a, nke bu eziokwu bu na ejikọtara Big Data na o nwere ike ichota otutu ihe omuma nke n’eme ka ichota ụkpụrụ ma ọ bụ ụzọ isi eme ihe, nke mere na nyocha ya na-enye anyị nduzi iji mee mkpebi ndị kwesịrị ekwesị n'otu oge.
Ngbanwe nke nkà na ụzụ emewo ka nke ahụ nwee ike ịchekwa n'otu aka nnukwu ozi na, n'aka nke ozo, enwere ike inwe akụrụngwa ike inyocha nnukwu data a n'ime obere oge. Anyị anaghị ekwu maka ọtụtụ Gigabytes, mana banyere Petabytes.
1 Mkpa inyocha ihe niile ọmụma
2 Ike arụmọrụ ekele nnukwu data
2.1 Ntinye nke mita mara mma
2.2 Mwube nke usoro iwu usoro
3 Nnukwu data dị ka isi
Mkpa inyocha ihe niile ọmụma
Na mgbakwunye, enwere ike ịnakọta data taa n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Obi abụọ adịghị ya, netwọk mmekọrịta aghọwo isi iyi data nke enweghị ngwụcha. Inyocha ha ị nwere ike ịmata ihe ndị mmadụ dị ka, kedu egwu ị na-ege, ụgbọ ala ndị kachasị amasị gị na-enweghị ịjụ. Anyị nwere ike ịmata ebe ndị njem ga-aghọ ejiji n’oge ọkọchị ma ọ bụ nke ihe nkiri ga-aga nke ọma.
Ihe dị mkpa abụghị data nke otu onye, ​​ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku ma ọ bụ ọbụna nde ma mara ya na oge. Echiche ọ naghị enyocha puku mmadụ Iji nweta echiche banyere ihe ha na-ekwu na ha na-ahọrọ, ọ bụ okwu banyere ịhụ ihe nde mmadụ na-eme n'ezie iji chọpụta ihe ha na-eme na ọkacha mmasị.
Ihe atụ dị iche iche, site na ịbịanye aka na ndị egwuregwu (ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhụ ihe nkiri MoneyBall na Bratt Pitt dị ka onye protagonist gosipụtara otu esi Nnukwu data na egwuregwu) na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mkpọsa. Na 2012 Obama weputara igwe nyocha Big Data iji gosi ihe di iche na nkwurita ozi o zigara ndi nwere ntuli aka, ndi n’amaghi ama ma obu ndi na-agaghi atuputa ya.
Ejirila Data buru ibu mara usoro ihe oriri nke ndị bịara Gay Parade ma ọ bụ Mobile World Congress na izu ole na ole tupu ihe omume ahụ, jiri ha tụnyere izu nke ihe omume ahụ n'onwe ya. Nke a na-enye ohere imeziwanye maka ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu.
Ike arụmọrụ ekele nnukwu data
Ma, e nwere ndị ubi nke ojiji nke Big Data ọ na-apụtaghị nke ọma na ọ dị ezigbo mkpa. N'ihi ya, echiche nke Big Data na Ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ njikwa ike dị mkpa. Ka usoro ume wee rụọ ọrụ, ọ dị mkpa ịgafe data mmepụta na data oriri. Red Eléctrica de España kwesịrị ịhazi ihe ike na-abanye na ntanetị oge niile iji kwekọọ na ike nke onye ọ bụla n'ime nde 46 ndị Spain nwere.
Ike nke atuba n'ime uzo ma anaghi eri ya furu efu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmata ihe Na-eri usoro ike n'ụzọ dị otú a na-atụ anya ihe ọkụ ọkụ site na mmepụta ume.
Yabụ, mgbe ọmụmaatụ enwere Barça Madrid, Ntanetị eletriki mara na mgbe ezumike zuru, a ga-enwe ike dị elu n'ihi na nde mmadụ na-eji nkeji iri na ise ahụ esi nri, saa shower.
Ntinye nke mita mara mma
Na-adịbeghị anya na echichi nke smart mita ọnụọgụ data nke ụlọ ọrụ na-enye ọkụ eletrik na ọkụ eletrik amụbaala nke ukwuu. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịma ụdị nkwalite ha nwere ike ịme ndị ahịa, dabere na usoro oriri ha mere eme.
O nwekwara ike, site na nyocha amụma, ịtụ anya anomalies ma ọ bụ ọbụna chọpụta aghụghọ dị ka njikọta na ntanetị na ntanetị na ntanetị.
Mwube nke usoro iwu usoro
Ma n'ọhịa nke ike, nnukwu data nwekwara ike imeghe ọnụ ụzọ, ozugbo usoro mmebe iwu zuru oke nke na-enye ya ohere, izugbe usoro nke kesara ọgbọ. N'ụzọ dị otú a ma ndị na-azụ ihe na obere ụlọ ọrụ nwere ike ịghọ, na ntinye nke ume ọhụrụ, ihe ndị dị mkpa na nrụpụta ọrụ eletriki na ntanetị.
Y’oburu n’inwe ike ile anya ihe oriri na mmeputa nke a otu ìgwè, anyị nwere ike ịdabere na ọkụ eletrik nke ndị na-emepụta obere ihe a ga-agbanye n'ime ntanetị.
Njikwa mgbagwoju anya nke nwere ike ịpụta na ọtụtụ puku isi dị, dabere na oge a, ndị na-emepụta net ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa site na ntanetị a na-akpọ net net, bụ otu n'ime arụmụka ebutere n'ihu nnwere onwe nke mmepụta na ahia nke ike imeghari na Spain.
Ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya ijikwa eziokwu ahụ bụ na enwere ike ịnwe ọtụtụ nde ezinụlọ nwere ikike nke aka ha ọgbọ nke ume na isi mmalite. Dabere n'ụdị ike na ọnọdụ ihu igwe (ọnọdụ okpomọkụ, ikuku, igwe ojii, wdg) oriri ya ma ọ bụ profaịlụ mmepụta ga-agbanwe kpamkpam na ya mere netwọkụ kwesịrị ịtụ anya ntuziaka ndị a ma banye ma ọ bụ nye ike dị mkpa.
Mana nnukwu data nwere ike bụrụ isi nke ga - enyere aka mgbanwe a. Site na itinye data niile dị taa, ọ ga-ekwe omume ịmata onye ga-achọ ike na mgbe. Enwere ike mara ya, na mkpokọta ụzọ, ma na-echebara ihe usoro nke oge ọ bụla, ma ọ bụrụ na obere ndị na-emepụta ihe ga-enwe ike irite okporo na ntaneti n'otu ntabi anya ma ọ bụ, na ntụle, ha ga-eri ihe niile ha mepụtara na-agaghị awụpụ ihe ọ bụla. Na nke a siri ike abụghị ezigbo arụmụka maka ịghara ịma aka ahụ.
Nnukwu data dị ka isi
Njikwa nke nnukwu data yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ozi dị na sistemụ eletriki ugbu a na-emepe ohere dị egwu, nke ga - enyere aka ịmepụta obodo ndị na - acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ... Nnukwu data bụ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Mgbanwe ohuru ohuru site na Big Data
Louis Santos dijo
Zaghachi Luis Santos
Ozi dị jụụ.